Muxuu qabanayaa saldhigga wayn ee ciidamada badda ee ay Kenya ka furtay Lamu? - Bulsho News
Xigashada Sawirka, Kenya state house
Madaxwaynaha oo salaan ka qaadanaya cidamada
Madaxweyne Dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhawaan booqday Lamu halkaasi oo uu xarigga ka jaray saldhig ballaaran oo ay ciidamada badda ku yeelan doonaan Manda Bay oo ka tirsan deegaanka Lamu .
Intii uu booqashada ku jiray ayuu madaxweynuhu xarigga ka jaray taallada KNB Manda.
Sida laga soo xigtay Ciidanka Difaaca Kenya, taallada ayaa lagu xusayaa askartii dhimatay ee naftooda ku waayay iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo ee dalka.
Uhuru ayaa sidoo kale ubax dhigay Taalada Manda ee KNB.
Taliyaha militariga Kenya Janaraal Robert Kibocho ayaa dhankiisa sheegay in saldhigan uu taageero siin doono ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo
Maxaa xilligan ku soo beegay xoojinta ciidamada badda Kenya?
Madaxwayne Kenyatta oo salaan qaadanaya
Maxamed xaaji Dahqane oo ah sargaal howgab ka noqday ciidamada badda Kenya ayaa sheegay in sadeetameeyadii tirada iyo tayada ciidamada badda ee Kenya ay ahayd mid yar, balse imika la xoojiyay.
Waxaa uu sheegay in xilligii uu ka midka ahaa ciidamada badda ay haysteen maraakiib yaryar, balse imika ay ku howlgalaan maraakiib casri ah.
“1974 ilaa 1987-dii waqtigaas ciidan isk yar ayuu ahaa oo 3 ilaa far markab oo yaryar ku howlgala laakiin gadaashan intaan ka so baxay aad ayay u koradhay ciidamada badda Kenya maraakiib badan oo casri ah ayaa lagu soo kordhiyay,” ayuu yiri Mr Maxamed Dhaqane.
Waxaa uu intaa ku daray in waxa xilligan ku soo beegay in la xoojiyo saldhiga Manda Bay ay tahay iyada oo la furi rabo dekadda Lamu oo ah mid aad u ballaaran loona baahan yahay in la sugo ammaanka aagaasi.
“Waxaa Manda Bay waxaa hadda saldhig looga dhigay, lamu waxay noqonaysaa waa furdaddii labaad ee ugu wayn sidaa aawadeed marka waxay kalifta in la helo ciidan bad oo awood leh in meesha la dhigo si ay u sugaan nabadda furdada Lamu,” ayuu Mr Maxamed.
Maxamed xaaji Dahqane oo oo horey uga tirsanaa ciidamada badda ee Kenya ayaa dhanka kale sababta xilligan ku soo beegay saldhigan waxaa uu ku tilmaamay in ammaan darada ay sababayaan Al-Shabab ee deegaanka Lamu ay sii koradhay islamarkana loo baahan yahay ciidamo bad oo suga ammaanka xeebaha.
“Midda kale aagaaasi waxaa uu noqday mid ay nimankan dhalinyarada Soomaaliya ay soo galaan,” ayuu intaa ku daray.
Mr Dhaqne ayaa farta ku fiiqay in ciidamada badda ee Kenya ay 5 sano ilaa 10 sano ee la soo dhaafay ay sii xoogeysanyeen islamarkana lagu tilmaami karo “kuwa ugu awoodda badan bariga Afrika”.
“Waxaan aaminsanahay in awoodda ciidamadda badda ee Kenya 5 sano ama 10 sano ee la so dhaafay aad ayay u kobocday, waxaan u maleynayaa in bariga Afrika ay imika yihiin ciidamada ugu awoodda badan, awood-na u leh inay daafacdaan biyahooda,” ayuu intaa ku daray.
Arsenal Iyo Brighton Oo Ku Hishiiyay Bar-bar Dhac...
Liverpool Oo Looga Digay In Ay Heshiis Cusub...
Kenya: 3 Guul darro oo ay ka mid...
Aragtida shacabka Soomaalida ee go’aanka Maxkamadda ICJ